ईसीटीएसमा विरोधाभास : कसरी घट्छ ढुवानी लागत ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण ईसीटीएसमा विरोधाभास : कसरी घट्छ ढुवानी लागत ?
on: २४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०५:२७ लेख | दृष्टिकोण
ईसीटीएसमा विरोधाभास : कसरी घट्छ ढुवानी लागत ?
विश्वका ४९ भूपरिवेष्टित देशमध्ये ४५ ओटा गरीब छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले तयार पारेको मानवीय विकास सूचकांकमा यस्ता १५ देश अति पिछडिएको सूचीमा छन्, तीमध्ये नेपाल एउटा हो । तटीय छिमेकीको तुलनामा भूपरिवेष्टित देशको प्रतिव्यक्ति आय ४० प्रतिशत न्यून पाइएको छ । पारवहनको उच्च लागत, सीमित उत्पादन र बढ्दो व्यापारघाटा भूपरिवेष्टित अर्थतन्त्रका औसत अवरोध हुन् । अर्थतन्त्रका यस्ता असहजताको निवारण सम्भव छैन । तर, न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि अधिक चल्तीको भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया हटाएर नेपालले ढिलै भए पनि प्रयास थालेको छ । कोलकाताको प्रक्रियागत सुधार वैदेशिक व्यापार सहजीकरणमा सकारात्मक आयाम हो ।
गत १५ फेब्रुअरीदेखि कोलकाता बन्दरगाहमार्फत हुने समुद्रपार व्यापारमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू गरियो । यो प्रणालीले नेपाली आयातमा कोलकाता बन्दरगाहमा भन्सार प्रक्रिया हटेको छ । आयातकर्ताले कोलकतामा भारतीय आयातसरह भन्सार प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाएका छन् । नेपाली मालसामानको स्वामित्व भारतीय एजेन्टलाई दिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य र वस्तुको उत्पत्ति स्थलबाट नेपालसम्म सोझै ढुवानीको व्यवस्थाले सहजतालाई संकेत त गरेको छ, तर नेपालको व्यापार र अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितमा रुपान्तरण गर्न थप प्रक्रियागत व्यवस्थापनको अभाव खट्किएको छ । यसका लागि जति गम्भीर हुनुपर्ने हो हाम्रा सरकारी संयन्त्र त्यति गम्भीर देखिएका छैनन् ।
नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित मुलुकले समुद्रसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुनुका कारण सडक र हवाई यातायातमा ठूलो लगानी लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, यस्ता पूर्वाधारमा भएको लगानीको ओज लुकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवमा राखिएका यस्ता योजनाको गति लज्जाको विषय बनेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ ले ५८ हजार किलोमीटर सडकको तथ्यांक समेटेको छ । सडकको सुरक्षा र गुणस्तरको अवस्था दयनीय छ । समुद्री यातायातको तुलनामा सडक र हवाई यातायात धेरै खर्चिलो मानिन्छ । पानी जहाज र रेलभन्दा सडकमार्गको ढुवानीमा क्रमशः ३ र २७ गुणा बढी खर्च लाग्ने अनुसन्धानले देखाएका छन् । रेल र जल यातायातमा नेपाल परनिर्भर छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको परिमाण नगन्य हुनुमा ढुवानी खर्च पनि मुख्य हो । पूँजीको लागत र श्रमको उत्पादकत्वले पनि उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई प्रभावित पार्छ । हामीकहाँ यी सबै सरोकार सकारात्मक छैनन् । चर्को खर्च तिरेर उत्पादनको निकासी सम्भव हुँदैन । यस्ता उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धाको सामथ्र्य पनि राख्दैनन् ।
ईसीटीएस साधनमात्र :
नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा समुद्रपारतर्फको परिमाण करीब ४० प्रतिशत छ । त्योमध्ये अधिकांश कन्टनेर कार्गो कोलकाता बन्दरगाहबाट आउँछन् । २ वर्षअघि आन्ध्र प्रदेशको विशाखापत्तनम् प्रतिस्पर्धामा आएपछि कोलकाता र कोलकाता पोर्ट ट्रस्टकै मातहतको हल्दिया बन्दरगाहले प्रक्रियागत सुधार थालेका छन् । यो ती बन्दरगाहको व्यावसायिक बाध्यता हो । कोलकातामा लागू गरिएको ईसीटीएस यसैको उपज हो । ईसीटीएस तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि प्रयोगमा ल्याइएका भारतीय बन्दरगाहको प्रक्रियागत सहजीकरणको एउटा पाटोमात्रै हो । भारतीय भूमिका कार्गोको दुरुपयोग रोक्ने अभिप्रायको ल्याइएको यो प्रणालीमा नेपालभन्दा भारतको रुचि बढी छ । यसले ढुवानीको पारदर्शितामा सहयोग पुर्‍याउँछ । यसको कार्यान्वयनमात्र नेपालको आयात प्रतिस्पर्धी बनाउन पर्याप्त छैन । ईसीटीएसले कोलकाता बन्दरगाह भन्सारमा कागजी प्रक्रियाका नाममा हुने ढिलाइलाई निकास दिएको छ । सिपिङ कम्पनीले रेलमार्पmत हुने ढुवानी नेपालसम्मै दिने भएपछि भारतीय बन्दरगाहमा आयातकर्ताका प्रतिनिधिको भूमिका सकिएको छ ।
प्रक्रियागत सुधार जति भए पनि कोलकाता बन्दरगाहका केही जटिलता छन् । यो नहरमा आधारित बन्दरगाह हो । ठूला पानीजहाज आउन सक्दैनन् । वैदेशिक व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अब कोलकाता, हल्दिया र दोब्बर दूरीको विशखापत्तनम्को भर परेर हुँदैन । सम्भावित अन्य बन्दरगाह उपयोगका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको खाँचो छ । ढुवानीसँग जोडिएका सिपिङ कम्पनीको नियमन, रेल सेवा, नेपालमा बन्दरगाहको व्यवस्थापन प्रभाकारी नभएसम्म लागत घटाउने उद्देश्य सार्थक हुन सक्दैन ।
प्रतिस्पर्धाको आधार खोइ ?
भारतीय बन्दरगाहमा भन्सार प्रक्रिया हटाएर सिमानामा सीमित गरिएको छ । बन्दरगाहमा प्रतिनिधि हटाएपछि प्रतिनिधिको खर्च जोगिन्छ । यस्ता प्रतिनिधिको घोषित खर्च प्रतिकन्टेनर ५ हजार भारतीय रुपैयाँ (भारू) हो । ईसीटीएसका लागि ४ हजार १ सय भारू तिर्नुपर्छ । सिपिङ कम्पनीले नै वस्तुको उत्पादनदेखि गन्तव्यसम्म ढुवानीको जिम्मा लिएपछि जरीवानाको अनिश्चितता हट्ने तर्क छ । तर, वस्तुको उत्पत्तिदेखि गन्तव्यसम्मको समयसीमा कति हो ? यो स्पष्ट छैन । सिपिङ कम्पनीले यस्ता सम्भावित ढिलाइको जोखिम भाडामा समावेश गरेको हुन्छ । कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेका कन्टेनर कुनै पनि कारणले त्यहाँ अड्किँदा लाग्ने समय र ब्याजको लागतको जिम्मेवारी कसले लिने ? ढुवानीका क्रममा अनेक एजेन्सी संलग्न हुने भएकाले जोखिम वहन कसले गर्ने ? यस्ता प्रश्नहरूको नीतिगत निरूपण खोज्ने उपयुक्त बेला पनि यही हो ।
नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीमा मक्र्स सिपिङ लाइनको अधिपत्य छ । ४० प्रतिशतभन्दा बढी कन्टेनर ढुवानी यही कम्पनीले गर्छ । नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोलेको एकमात्र यो कम्पनीको अहिले ईसीटीएसमा एकाधिकारजस्तै छ । कोलकातामा नेपालका लागि दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले काम गर्छन् । तर, मक्र्सबाहेक अरू कम्पनीले ईसीटीएसमा चासो राखेका छैनन् । सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता आ≈वान गरी प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्छ । एकलौटी व्यापार मनोमानी र लागत अभिवृद्धिको अर्को हतियार सावित हुन सक्छ । ईसीटीएस लागू भएपछि पनि लागत खासै कटौती नभएको आयातकर्ताको गुनासो सुनिन थालेको छ । विगतमा एजेन्टले सिपिङ कम्पनीसितको साँठगाँठमा जरीवाना र अदृश्य खर्च बढाएको आयातकर्ताको आरोप रहन्थ्यो । आयातकर्ताको यो आरोप पत्याउने हो भने अहिले सिपिङ कम्पनीको पारदर्शितामा ढुक्क हुनुपर्ने भरपर्दो आधार छैन । सिपिङ कम्पनीलाई नियमनमा राख्न नीतिगत आधार बनाएको जानकारी पनि अहिलेसम्म छैन । लजिस्टिक कम्पनीबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको कानूनी आधार बनाउन अब ढिला गर्ने बेला छैन ।
कोन्करलाई लगाम :
कोलकातामा कागजी प्रक्रिया हटाइएलगत्तै रेल सेवाप्रदायक भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)ले प्रतिकन्टेनर ढुवानी भाडा भारू ५ हजार बढाएको छ । नेपाल भारतबीचको रेलवे सेवा सम्झौताले कोन्करलाई एकाधिकार दिएको छ । यसले कोन्करको मनोमानी बढाएको छ । कोन्करलाई कोलकाता आइपुगेको कन्टेनर वीरगन्जमा ल्याइपुर्‍याउने समयसीमामा बाँध्न आवश्यक ठानिएको छैन । तर, कोलकातामा भन्सार पास भएका कन्टेनर वीरगञ्ज आइपुग्न १३ देखि २८ दिनसम्म लागेका उदाहरणहरू छन् । कोलकाताबाट ५ दिनमा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा रेल आइपुग्नेमा आश्वस्त हुने गरी रेलवेमा प्रविधि र पूर्वाधार सुधार देखा परेको छैन । रेलवे सम्झौता संशोधन गरी नेपालको कन्टनेर ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा भिœयाइनुपर्छ । र, सम्झौतामा गन्तव्यसम्मको समयसीमा समेटिनुपर्छ । यसो भएमात्रै सही अर्थमा विलम्बको लागत घटाउन सकिन्छ ।
आन्तरिक पूर्वाधार :
कोलकाता बन्दरगाहको जाम अब नेपालका सीमावर्ती भन्सार र बन्दरगाहमा केन्द्रित हुनेछ । अहिले वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमात्रै रेल सुविधासँग जोडिएको छ । १४ वर्षअघिको पूर्वाधारमा सञ्चालित यो बन्दरगाह अहिले नै आयातको चापले साँघुरिइसकेको छ । कोलकातामा ईसीटीएस लागू भएपछि वीरगन्ज बन्दरगाहलाई पूर्वाधार बढाउने स्वाभाविक दबाब बढेको छ । तर, क्षेत्रफल विस्तारको योजना मुआब्जाको अलमलमा जेलिएको छ । यो सम्भावित असहजतालाई व्यावसायिक अवसर बनाउने दाउ हेरेर बस्नेहरूको पनि कमी छैन । कोलकातामा अहिलेको उपलब्धिको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र दोहनका निम्ति नाकामा प्रभावकारी भौतिक र मानवीय पूर्वाधारको प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ ।
Very well written with realistic point of view.
२५ बैशाख २०७६, बुधबार ०६:४१
३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०८:११
२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०७:५१
२८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ०५:१२